Sida loo ogaado haddii aad jeceshahay: wax walba halkan ka baro | Ragga Stylish
Xaqiiqdii adiga ayey kugu dhacday inaad qof taqaanay maalmo kadib xiriirro ay la sameysay iyada oo illaa heer aadan ogayn inaad jacayl ku dhacayso iyada ama asaga. Waxaa jira dad badan oo jahwareeriya dareenka markay la macaamilayaan dad gaar ah oo qayb ka ah nolosheena si aad iyo aad u badan. Sidaa darteed, waxaan halkan ku siineynaa talooyin ku saabsan sida loo ogaado haddii aad jeceshahay
Sideed ku ogaaneysaa inaad jaceyl ku jirto? Halkan waxaan kuu sheegeynaa wax walba.
1 Jacayl: wax shakhsiyadeed
2 Sida loo ogaado inaad jacayl kujirto iyo inkale
Jacayl: wax shakhsiyadeed
Maaddaama jacaylku yahay mid shakhsiyan ku xiran nooca qofka aan la macaamilno, waxaan ku siin doonnaa xoogaa talo ah oo ku saleysan sayniska. Dhamaanteen waxaan waligeen isweydiinay inaan jaceyl qof leenahay. Si kastaba ha noqotee, waa macquul in waxa aad dareento xilligaas uusan ahayn jacayllaakiin si fudud soojiidasho xoog leh.
Dadka badankood waxay isbarbar dhigaan xaalada taagan iyo ta hore waxayna u horseedi kartaa jahwareerka ugu badan. Waxaa jira dareenno ka cadcad kuwa kale waxayna u horseedi kartaa jahwareer xoogaa ah markay tahay ogaanshaha inaad jacayl ku jirtid iyo in kale. Ma jiro hab cilmiyeysan ama wax ku ool ah oo naga caawinaya inaan ogaanno 100% sida loo ogaado haddii aad jeceshahay. Maaddaama aysan jirin algorithm kumbuyuutar ah oo naga caawiya xallinta su'aalahan wadnaha, waa inaan is weydiinnaa su'aasha si aan u ogaanno haddii aan dhab ahaantii jacayl ku jirno ama waxa aan dareemeyno ay yihiin wax ku meel gaar ah.
Waxa aan ku cadeynay waa in jacaylku ku saleysan yahay 3 mabda 'aasaasi ah: xamaasad, isku dhawaansho iyo ka go'naan. Mabaadi'da aasaasiga ahi waa inay ahaadaan heer sare si ay ugu badiso inaad qof jeceshahay. Waa lagama maarmaan in ay tahay inaad waqti ku qaadato ama aad la kulanto qofkaas maadaama, haddii kale, waxay noqon doontaa uun soo jiidasho bilow ah. Si loo ogaado heerka aad gaarsiisan tahay, waa inaad ka jawaabtaa dhowr su'aalood adigoon fileynin in dhammaantood looga jawaabi karo haa iyo maya. Si loo go'aamiyo sida loo ogaado haddii aad jeceshahay, waa inaad ka jawaabtaa su'aalaha gaarka ah ee kugu habboon si aad u yeelato fikrado xoogaa cad.
Waxaan ku weydiineynaa su'aalo aasaasi ah oo ay tahay inaad isweydiiso haddii aad rabto inaad ogaato inaad jacayl ku jirto iyo in kale.
In kasta oo xamaasadda xaaladahaas ay tahay mid lama huraan ah, haddana ma ahan waxa kaliya ee lagama maarmaanka u ah in la ogaado haddii aad jeceshahay. Tani waa mid ka mid ah tallaabooyinka ugu horreeya, sidaa darteed, su'aalaha waxay la xiriiraan dareenkan. Waxa ugu horeeya ayaa ah ogow inta jeer ee aad ka fikirto qofka kale. Haddii qofkani joogo fikirkaaga maalin kasta, waxay u badan tahay inuu bilaabo inuu noqdo qof adiga kaaga muhiimsan.
Arrinta labaad ayaa ah in la ogaado haddii aad u hilowdo qofkaas marka ay kala maqan yihiin iyo marka ay kala maqan yihiin. Baahida loo qabo in la arko qof si isdaba joog ah oo waqti la qaata oo waqti la qaata ayaa ku filan si loo abuuro isku xirnaan xoogaa uga dhow saaxiibtinimada fudud. Ugu dambeyntiina, wax la xiriira hammuunku waa haa waa wax lagu farxo ama lagu farxo in la arko qofka. Waxaa jira waqtiyo aan ku raaxeysan karno qof xaqiiqda fudud ee ah inuu fahmayo oo aan si fiican isu fahmayno. Si kastaba ha noqotee, waxaa muhiim ah in la aqoonsado in aragtida qofkani ay tahay wax xiiso leh oo kiciya dareenka farxadda ama waxa loo yaqaan "cayayaanka".
Marka la eego qodobkan, haddii aad ka jawaabtay maya su'aasha labaad ee qaybta xiisaha, uma baahnid inaad sii waddo shakiga qofka. Kaliya waa soo jiidasho ku meel gaar ah.
Si aad u ogaato haddii aad jacayl u hayso qof waa inaad tixgelisaa saaxiibtinimada. Waxay kuxirantahay qofka aad jeceshahay laakiin qaab platonic ah. Taasi waa, in kastoo aad qof aad u jeclaan karto, waa qorraxda, saaxiibtinimada, haddii hammuunku ka maqnaado soo jiidashada galmada, jacayl kuma jiri kartid. Haddii aad isku darto saaxiibtinimo iyo xamaasad, waxay kuu horseedi karaan jacayl.
Waa inaad ogaataa sida aad ugu xiran tahay qofka kale. Haddii isku xidhka eWaxay u badan tahay inaad qofkaan ku mashquulsanaato, maadaama aad waqtiyo aad u fiican heli karto. Arrinta labaad ayaa ah in la ogaado illaa inta qofka kale uu ka garanayo waxa shucuurtaada iyo dareenkaagu yihiin mar walba. Haddii wada xiriirka idinka dhexeeya uu fududahay, tani waxay u horseedaa qofka kale inuu awood u yeesho inuu sifiican u ogaado dareenkaaga iyo shucuurtaada markaad wada joogtaan ama aad kala maqan tihiin
Ugu dambeyntiina, isku dhawaanshuhu wuxuu ku saleysan yahay ogaanshaha haddii labadiinuba aad isku kalgacal tihiin kan kale. Hadday labada qofba marwalba midkoodba kan kale ka yeelo, jacaylka ayaa u badan inuu jiro.
Waa faahfaahintii ugu dambaysay ee lagama maarmaanka u ah in la ogaado haddii qofku jacayl ku jiro iyo in kale. In kasta oo kalgacalka iyo isku dhawaanshuhu ay lagama maarmaan u yihiin xiriir kasta, jacaylka jacaylku wuxuu kaa dhigayaa mid doonaya inaad gaarto heer kasta oo ballanqaad ah xaalad kasta oo kale. Haddii aadan u baahnayn inaad u baahan tahay inaad xiriirka si dhab ah u qaadatid, markaa jawaabtaada horay ayaad u haysataa.
Labada su'aalood ee ugu dambeeya su'aalahan waxay ku saleysan yihiin ogaanshaha qaybtaan. Waxa ugu horreeya waa in la ogaado haddii aad dareento masuuliyad ama aad daryeesho daryeelka qofka kale. Waxaad u badan tahay inaad ka walwasho inuu qofkani si fiican ama xun u shaqeynayo shaqada, qoyska, asxaabta, ama nolosha guud ahaan. Si kastaba ha noqotee, tan waxaa lagu dhammeeyaa su'aasha ah haddii aad diyaar u tahay inaad siiso wax walba si aad ula joogtid qofkan.
Markii aan dhahno wax walbo sii waa in la dhiso xiriir aad u culus oo lagala soo baxo tan ugu yar. Xiriirkan, hammuun, isku dhawaansho iyo ballanqaad waa in isla mar la daweeyaa. Iyagu waa doorsoomayaasha ugu muhiimsan ee lammaanuhu u shaqeeyaan.
Haddii aad awood u yeelatay inaad ka jawaabto dhammaan su'aalaha si sax ah, waxaad horayba u caddeysay inaad jeceshahay qofkaas. Kaliya waa inaad daacad noqotid oo u sheegtaa qofkaas wax walba adigoon sameynin khaladaadka caadiga ah. Aad ayey muhiim u tahay in, bilowgii, aad heshay xiriir caafimaad oo gebi ahaanba daacad ah.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan likaha sida loo ogaado haddii aad jeceshahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Sida loo ogaado inaad jacayl kujirto iyo inkale